Macaamiisha Iskudhufan (Simple Payment Companion) Ku Talo-gelinta Talooyinka Raadinta Taleefanka Ku Saabsan Macaamilka Macaamilka
Sidee u xaddidan oo aad u heshaa wada-hadallada muhiimka kuu ah ee ku saabsan warbaahinta bulshada? Facebook iyo Twitter waa il heer sare ah oo ka shaqeeya dad badan iyo dad badan oo internetka ah.
Waa inaad barataa xeeladaha iyo istaraatiijiyooyinka Twitter-ka ee Frank Abagnale, khabiirka ah Semt , haddii aad rabto inaad kordhiso ka qaybqaadashada macaamilka ganacsigaaga.
La wadaagida fariimo badan oo fiidiyow ah oo aan diirada saaraynin dooddu ma ku siinayaan natiijooyinka aad rabto. Sidaa darteed, waa muhiim inaad isticmaasho goobahaaga warbaahinta bulshada si habboon oo aad u baratid hababka cusub si aad u hesho natiijooyinka la doonayo.
Ku bilow wadahadalka adiga oo raacaya raadinta caadada ah
Twitter waa ilal aad u fiican oo dad badani ku mashquulsan yihiin - led da parete. Waa inaad la hadashaa dadka kale iyagoo adeegsanaya mashiinkan oo ay ku qabtaan dhowr jeer tartanno, ololayaal, su'aalo, iyo si firfircoon uga qaybqaataan sheekeysiyada leh farsamooyinka raadinta caadiga ah. Waa inaadan iloobin inaad isticmaashid hashtags inta aad isticmaaleysid Twitter haddii aad tahay arrin aad u culus oo soo jiidata dad badan iyo dad ka badan goobtaada ama ganacsigaaga internetka. Raadinta bogga sare ee Twitter waxay caawimaysaa dadka isticmaalaya doodaha qiimaha leh. Waxaa intaa dheer, waxay ku siinayaan fursado badan oo aad ku dhisi kartid bulshooyinkaaga internetka si aad ula xiriirto dad badan..U oggolow naftaada in aad isticmaashid hashtags, keywords, odhaahyo iyo fursadaha raadinta Twitter si caqligal ah si aad u hesho natiijooyinka aad rabto. Marka aad dhacdo dhacdo, waa inaad mar walba hubisaa in ay kor u qaadeyso on Twitter iyo inaad adigu soo jiidato dad aad u tiro badan. Qalabka qaar ayaa diyaar u ah inay si dhaqso ah u dejiyaan dhacdooyinkaaga si aad u sii wadato xitaa adigoo isticmaalaya Twitter.
Waa in aad ka faa'iideysatid Hootsuite ee Goobta Raadinta ee Googe-ku-oolka ah si aad u heshid sheekooyinka ugu habboon internetka. Tani waxay ku siinaysaa sheekooyinka geo-helitaanka si aad u qorsheyn kartid oo aad u bilaabi kartid shabakad isla marka aad ku dhawaaqday taariikhda dhacdadaada. Intaa waxaa dheer, waa inaad beegsataa dadka maxalliga ah haddii aad haysato ganacsi lebistar iyo dhoobo ah. Tani waxay suurtogal u tahay isticmaalka fursadaha raadinta sare ee Twitter, waxayna ka caawisaa helitaanka sheekooyinka meelaha ku habboon kaliya.
Soo saar saamileyda muhiimka ah ee warbaahinta bulshada
Twitter ayaa faa'iido u leh kuwa u isticmaala wada sheekeysiga xirfadeed. Isticmaalka bogga warbaahinta bulshada, waxaad si sahlan u ogaan kartaa saameynaha bulshada ee muhiimka ah waxayna la xiriiri karaan iyaga. Noocyo badan oo sahlan ee Twitter ayaa loo isticmaali karaa si ay u helaan waxyaabo badan oo saameyn ku leh ganacsigaaga. Waa inaad isticmaashaa xulashada raadinta Twitter-ka si aad u hesho magacyadooda iyo profiles, oo waxaad gashan kartaa ishtag iyo keywords keywords. Fikradda kale waa inaad isticmaali kartaa filterka Klout si aad u heshid saameynta xirfadlahaaga. U oggolow in Twitter la qabto inta kale, waxaana laga yaabaa inaad ku raaxaysato guusha internetka
Waa inaad sameysid liistada taageerayaashaada oo aad waydiiso su'aalaha ku saabsan kuwa ugu saameynta badan ee warshadaha. Tani waxay badbaadin doontaa wakhti badan, oo waad la xiriiri kartaa dadka kale adigoo aan wax dhibaato ah. Had iyo jeer xasuuso in aysan jirin wax gaaban oo lagu guuleysto, markaa waa inaad diyaar u ahaato inaad si adag u shaqeyso.